Ama-pancake aqoshiwe, iresiphi ngesithombe. Izindlela zokwenza i-custard esiphundu ama-pancake ngobisi, amanzi, amanzi abilayo, i-kefir
I-custard pancake evelayo: zokupheka zakudala zokupheka zakudala
Kunezinhlobo eziningi zokupheka okumnandi futhi ezinomsoco we-pancake. Enye yezindlela ezilula zokupheka ukwengeza ingilazi yamanzi abilayo ku-batter pancake - ngakho kwakukhona ama-pancake. Ukuzenza akunzima nakancane, njengoba kungase kubonakale ekuboneni kokuqala. Isitsha esilungele ukulungele ukugcwalisa (i-cottage shizi, inyama, jam).
Ama-pancake ahlanzekile nge-kefir, iresiphi ngesithombe
Uhlu lwezithako kulesi sidlo alukhulu - ungathola kalula yonke imikhiqizo efrijini lakho. Futhi ama-pancake alungiselelwe kalula futhi ngokushesha (cishe imizuzu engama-30-40). Siyakunakeka iresiphi evela kubapheki abakhulu. Ukumangalela abathandekayo bakho ngokulungiselela lezi zikhwama zokondla i-custard kwi-kefir - izivakashi nomndeni zizoneliseka!
Umfula - izindebe ezimbili
Amaqanda - ama-2 ama-pcs.
I-Kefir - ilitha eli-1
Ubisi - ingilazi engu-1
Ukufudumala kwe-kefir kuya ekamelweni lokushisa (ungayenza kuhhavini ye-microwave). Engeza amaqanda kuyo futhi uxube nomxube ukuze uthole ubukhulu obuningi.
Engeza izithako ezomile: usawoti wokuqala noshukela, bese kuthi kancane kancane uthele ufulawa (ngalesi sikhathi, ugqugquzela yonke ingxube). Ngokokuvumelana, inhlama iyoba njengokhilimu omuncu wamanzi.
Sishisa ubisi ku-microwave kuya kuma-degree angama-80 (akukho!) Futhi kancane kancane uthele inhlama, ngenkathi ugqugquzela njalo. Masiphuze imizuzu engaba ngu-10-12.
Sishisa epanini lokuthosa bese uqala ukuthosa ama-pancake. I-pancake ngayinye eyenziwe igcwele amafutha.
I-pancakes enomsoco enobisi namanzi abilayo, iresiphi ngesithombe
Uma ungakaze upheke ama-pancake ngobisi namanzi abilayo, manje yisikhathi sokuzama! Umphumela ngeke ukushiye ungenandaba - ngenxa yamanzi abilayo isitsha siphenduka sibe mnandi futhi sibe mnene. Enye yezindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokugcina ama-pancake.
Amanzi abilayo - ingilazi eyodwa
Amaqanda - izingcezu ezingu-3.
Ubisi - izinkomishi ezimbili
Ukhula - izindebe ezingu-1-1,5
I-Sugar - 1-1,5 wezipuni.
Amafutha e-sunflower - 2-3 wezipuni
I-pin - pinch
I-Baking Powder - 1 tsp.
Hlanganisa ubisi namaqanda (pre-beat nge mixer), engeza ufulawa olufuthiwe kanye ne-baking powder. Umquba njengomphumela uyoba njenge-pancake.
Thela ingilazi yamanzi abilayo, ushukela, usawoti uhlanganise.
Esikhathini se-skillet esishisayo, phakethe ama-pancake.
Iresiphi yangempela ye-pancake yesitokisi ku-yogurt
Isitsha esihlwabusayo kakhulu nesokwanelisayo sitholakala nale recipe. Ngenxa ye-kefir pancake iyoba mnene kakhulu futhi iyathandeka. Futhi uma ufuna ama-pancake akho e-chili ukuba abe nezimbobo eziningi, ubhake epanini elishisayo kakhulu.
Kefir - 2 izinkomishi
Amafutha e-sunflower - izinto ezingu-2 ze-l.
Usawoti noshukela - i-pinch,
Hlanganisa usawoti, ushukela, i-kefir, amaqanda kanye nofulawa osikiwe ndawonye. Basha kahle nge-whisk.
Emanzini abilayo, engeza i-soda, ugqugquzele futhi ngokushesha uthele inhlama ephumela. Gcoba bese ulinda imizuzu engu-5-7, bese uthela emafutheni.
Ikhekhe elimnandi le-pancake nge-custard, iresiphi ngesithombe
Le dessert ihlale idla kakhulu futhi idliwa ngokushesha, ngakho-ke nakekele inani layo etafuleni lokugubha. Inqubo yokupheka ihlukaniswe ngezigaba ezimbili: frying pancake kanye nokupheka. Indlela yokwenza lokhu, sifunda ngokuqhubekayo.
I-egg - izingcezu ezingu-3.
Sugar - 4-5 wezipuni.
I-vanilla (ukhilimu) - i-sachet
Umfula - 2.5 izinkomishi
Ubisi - izinkomishi ezine
Amanzi - ingilazi engu-1
I-Butter - 40 g
Amafutha omifino - 1 tbsp.
Hlanganisa ukudla okulandelayo: usawoti, soda, ushukela namaqanda. Engeza isigamu sendebe yamanzi afudumele kanye nesilinganiso esifanayo nobisi. Bese uthele u-2 izinkomishi zofulawa osikiwe. Hlanganisa ingxube bese wengeza amanzi asele nobisi esele. Hlanganisa bese wengeza amafutha emifino.
Gcoba epanini lokuthoza ngamafutha we-sunflower, ukushisa nomlilo bese uphake ama-pancake emaceleni amabili.
Manje yenza ukhilimu: ingilazi yobisi kanye nesilazi yoshukela ingeza epanini elincane bese uletha ngamathumba. Ngenkathi okuqukethwe kwepani kukhathele, yenza ingxube ka-0.5 izindebe ushukela, 1 iqanda, ingilazi yobisi kanye nezinkomishi ezingu-0.5 zefulawa. Thela ingxube ebisi obisilayo, gubungula kahle futhi, ngokushesha nje lapho kuvela ukugcoba, khipha epulatifeni, wengeze i-vanilla ushukela, ulinde ingxube ukuba ipholile, uyibeke endaweni ebandayo ihora.
Gcoba ama-pancake nge-custard bese uhlobisa ngamajikijolo nama-walnuts.
Ama-pancake amangalisayo emanzini, iresiphi ngesithombe
Lezi zinhlayiya, eziphekwe emanzini, zihlale zijabulela ukunambitheka okhethekile, futhi konke ngenxa yokuthi ufulawa, ophuzwa ngamanzi, ugcina umswakama, ophuza kuphela uma ubhaka. Ngakho-ke, ama-pancake e-custard atholakala emoyeni nase-pyshnenkimi.
Umfula - 500 g
Amanzi - izinkomishi ezi-3-3.5
Usawoti, i-soda - ukunambitha
Amaqanda agaya ushukela. Futhi amanzi aletha esimweni sokubilisa futhi athululelwe ekufakeni okuhlanjululwe.
Sixhuma izingxube zombili (amaqanda + ushukela namanzi + ufulawa) futhi wengeze zonke izithako ukunambitha. Faka kuze kube bushelelezi.
Masinyane qalisa ukuthosa inhlama epanini elitshisayo lokubhoboza nebhotela. Bhaka uze ulungele.
I-Wardful custard ama-pancake ku-kefir: iresiphi yevidiyo
Le vidiyo iveza incazelo ngezinyathelo zendlela yokwenza umuthi omuhle usebenzisa i-kefir. Zonke izenzo ezitholakala kuvidiyo ziboniswa ngokuningiliziwe futhi ngokucacile, ngakho ngeke kube nzima kuwe ukupheka ama-pancake e-custard. Bon appetit! Ukupheka ama-pancake kwi-yogurt. Futhi uzoba nesithakazelo ezihlokweni: Ukupheka kanjani ikhekhe le- pancake: zokupheka ezipheka kakhulu zokupheka ama- pancake amnandi ku-yogurt: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokupheka ama-pancake e- Lenten emanzini: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokupheka ama-pancake aphefumulayo futhi athakazelisayo nge-cottage shizi: ama- pancake angcono kakhulu okupheka ngaphandle amaqanda: zokupheka zokupheka ama-pancake ngobisi, amanzi, i-kefir
Amafritters avela kumazambane
Yeka indlela okumnandi futhi engavamile ukupheka ama-pancake ngama-manga, zokupheka ngesithombe
Izidlo ezizenzela ngokushisa, ngokushisa - ama-pancake ngama-apula, zokupheka ezithakazelisayo kunazo zonke ngesithombe
Umphumela womsindo empilweni yomuntu
Iresiphi yesitsha esishisayo ebhodweni
Indlela yokuhlukanisa kusihlwa nabangani
Izimpawu zobunqunu besifazane
Ukuhlukanisa ngemva nje komshado
Ubuhlobo obuseduze emsebenzini
Isibalo esincane ngemva kokukhulelwa
Isaladi yamakhukhamba ebusika: nge anyanisi namafutha yemifino, ngaphandle kokuzala kanye nayo. Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ngezinyathelo ze-salads ebusika ezivela kwamakhukhamba - ngesithombe
Inyanga emva kokukhulelwa okuqinile
Ukuthuthukiswa kwengane yomnyaka wesibili wokuphila
Ukwakha impilo enempilo kubantwana
Ingxoxo yakamuva esathathwa kuNastya Kamensky
Izimpawu nokudla okunempilo gout
U-Alexey Panin wamangala ababhalisile be-Instagram ngesenzo esihle, ividiyo